जाडोमा जोर्नी र हड्डीको दुखाइबाट कसरी बच्ने ? « Drishti News – Nepalese News Portal
जाडोमा जोर्नी र हड्डीको दुखाइबाट कसरी बच्ने ?
२९ कार्तिक २०७८, सोमबार 8:17 am
काठमाडौं । चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ । चिसो बढ्दै जाँदा देखिने एउटा स्वास्थ्य समस्या हो जोर्नीमा हुने दुखाइ वा आर्थराइटिस । यो रोगको समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई जाडोको मौसम अधिक समस्याको समय हुने गर्छ ।
-जाडोमा आर्थराइटिसबाट बच्ने एउटै मात्र उपाय भनेको चिसोमा धेरै नहिँड्नु र न्यानोमा रहनु हो । चिसोका कारण मानव शरीरका हड्डीहरुमा सामान्यतया नोक्सानी भइरहन्छ । त्यसैले दुखाइबाट बच्नको लागि न्यानो कपडा लगाएर बस्नु नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो ।
-जोर्नीमा हुने दुखाइबाट टाढा रहनको लागि भिटामिन डी अत्यावश्यक तत्व हो । यसका लागि अधिकतम बिहानको घाममा बस्नु उपयुक्त हुन्छ । शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी पनि यसबाट पाउन सकिन्छ ।
-जाडो मौसममा घरमै बसिरहनाले मोटोपना बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । घरमै बस्दा धेरैजसो स्वादिस्ट खाना खाने गरिन्छ । यसले मोटोपना बढाउँछ । अत्यधिक तौलका कारण पनि घुँडा र खुट्टामा अनेक किसिमको समस्या देखिन सक्छ ।
त्यसो त चिसो मौसममा बिहान व्यायाम गर्नु पनि त्यति फाइदाजनक भने हुँदैन । तर यसको अर्थ सक्रिय नै नहुने भन्ने भने होइन । यो समयमा सामान्य किसिमको व्यायाम आवश्यक हुन्छ । तातो पानीले नुहाउनु धेरै उपयोगी हुन्छ ।
-माछाको तेलमा ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिडहरू आवश्यक हुन्छ । यो हड्डीसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि धेरै उपयोगी कुरा हो । यसले सूजनको स्तर कम गर्छ । शरीरको मालिश गर्दा संयुक्त र मांसपेशी दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ ।